Xukumada Soomaaliya Oo ka Hadashay Weerar La Sheegay In Loo Abaabulay Shariif Sheekh Axmed | Kaafi News
Xukumada Soomaaliya Oo ka Hadashay Weerar La Sheegay In Loo Abaabulay Shariif Sheekh Axmed
Wasaaradda Amniga Gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa gaashaanka ku dhufatay warar la isla dhex marayay oo sheegayay in laamo ka tirsan dowladda ay abaabuleen weerar ka dhan ah madaxweynihii hore ee dalka, Shariif Sheekh Axmed.
Warka kasoo baxay Wasaaradda Amniga gudaha ayaa loogu gooddiyay waxa loogu yeeray “dadka soo abaabulay warka been abuurka ah”.
Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, oo labaduba ku jireen doorashadii madaxtinnimada ee ugu dambeysay Soomaaliya, ayaa hadda ku mideysan hal xisbi siyaasadeed oo lagu magacaabo Himilo Qaran.
Warka ku saabsan “weerarka” ayaa soo baxay dabayaaqadii isbuuci dhammaaday.
Haseahaatee, wali ma jiro hadal kasoo baxay Shariif Sheekh Axmed oo uu arrintaas ku xaqiijinayo ama ku beeninayo.